Kuze kube manje, ukubamba i-jig kubhekwa njengenye yezinhlobo ezikhiqizayo kakhulu zokudoba nge-spinning, ngakho iningi lama-anglers likhetha ukulisebenzisa kungakhathaliseki ukuthi liyisikhathi sini, kodwa okukhiqiza kakhulu kusetshenziselwa ukudoba kwasebusika. Uma ubheka ukulinganisa kwe- spinnings ye-jig nokukhetha idivayisi enhle kunazo zonke, udinga ukunaka inani elikhulu ngokwanele lezici ezihlukahlukene, kufaka phakathi isivinini sokuphendula, ukulawula ukuluma, kungenzeka ukuphonsa ebangeni elide elide, nokwenza ukusikeka okuqinisekile. Ngesikhathi esifanayo, kuncike ekutheni ukhetho olukhethiwe kahle, impumelelo yokudoba okunjalo ixhomeke ngqo.
Yini okudingeka uyicabangele?
Ukuhlola ukulinganisa kokuphenya kwe-jig nokunqunywa ngemodeli kulandela ngemuva kokuthi usuhlakazekile ngokuphelele ezimweni zokudoba kwakho:
Izinhlanzi ezisuka ogwini noma ezivela emkhunjini zizobanjwa;
Ujulile kangakanani echibini lapho kudoba khona.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukuze ukhiphe noma yimaphi amaphutha kwinqubo yokukhetha, kubalulekile ukuqonda ukuthi yikuphi ukungezwani okukhona phakathi kwe-spinnings futhi ngaphansi kweziphi izimo izinhlobo ezihlukahlukene ezingasetshenziswa. Phakathi kwezici eziyinhloko zokuphenya yilokhu okulandelayo:
Ezimweni eziningi, ukulinganisa kokuphenya kwe-jig kufaka amadivaysi angama-240 kuya ku-270 cm. Uma usebenzisa induku emifushane, kungenzeka kube nezinkinga ezihlukahlukene mayelana nebanga lokukhipha, ngoba izinhlanzi ezilula zingakwazi ukuphonswa kalula ku-50 noma 70 Amamitha, futhi uma usebenzisa induku encane, akunakwenzeka. Ngesikhathi esifanayo, izinduku ezide kakhulu azizona eziphumelela kakhulu, nakuba ezinye izingcweti ze-anglers zikhetha ukubheka noma ukuhlanganisa ukulinganisa kwezinhloli ze-jig engama-330 cm ubude. Kucatshangwa ukuthi kulungile kakhulu kwabaqalayo ukuba basebenzise ubude obuzungezayo obungaba ngu-240 cm.
Uma ubude benduku kungeke kube nzima ukuzinquma, kunzima kakhulu ukucacisa uhlelo ukuthi ukuhlunga kwe-jig kufanele kube khona. Ukulinganisa kufaka phakathi amamodeli amaningi anezinhlelo ezihlukene, ezingenakulinganiswa ngeso futhi zingazwela kuphela.
Idizayini yenduku ikuvumela ukuba uqonde ukuthi ukuzungeza okuningi kuguquguquke kangakanani nokuthi kuthinta ngokushesha kangakanani ukuluma. Ngokuvamile, lapho ukhetha ukuphenya nge-jig, ukulinganisa kuskenwe ukucacisa amaphethini okusheshayo nebucayi lapho iphoyinti lenduku ligobile khona. Uhlelo olunjalo lubizwa ngokuthi "ukuphela".
Futhi, kunesimiso esincane se-parabolic, okusetshenziswa ngayo induku.
Khetha kule nkinga, kuye ngokuthi yini ocabanga ukuthi ibaluleke nakakhulu. I-spinnings engcono kakhulu ye-jig (isilinganisansi ngezansi) ngesistimu encane ihlinzeka ngokushelela okude, ngenkathi uhlelo olusheshayo lubonakala ngokuzikhandla okukhulu futhi ludlulisela kahle umqondo wethambo. Isixazululo esiphezulu kakhulu singabizwa ngokuthi uhlelo oluhlangene, oluthi, ngemithwalo encane, lubonisa izinzuzo eziyinhloko zesistimu esheshayo, ngenkathi ithonya elanele ngokwanele liqala ukusebenza njengendlela encane.
Izintambo ze-telescopic cishe azifakiwe kwi-spinnings engcono kakhulu ye-jig (isilinganiso sokuthi i-spinning engcono kakhulu), njengoba ibuhlungu kakhulu ekudluliseni ulwazi mayelana nokuluma. Ngokuvamile zikhona izimo ezinjalo lapho kungenzeka khona ukubona ukukhala ngokubukeka ngokuhambisana nokuhamba kwenduku yentonga, ngoba ukunyakaza okunjalo akudluliselwa esandleni ngenxa yokuthi zilahlekile ezinhlanganisweni eziningi zezixhumanisi.
Isivivinyo sokuhlunga, esifakiwe esilinganisweni sokuhlunga se-jig esikebheni, sihambisana nesigaba esilinganiselwe futhi esincane, futhi isisindo sekhanda kulesi simo cishe silinganiselwa ku-12-38 amagremu. Izinhloko ezinzima kakhulu zisetshenziswe uma kunesidingo sokuthi udobe isikhathi eside, ngenkathi kudoba, lapho kungekho sidingo sokwenza isikhathi eside, kungasetshenziswa ukuhlambalaza kalula.
Ukukhethwa kwenduku yokudoba ngokudoba ngokuqondile kuxhomeke ekutheni umthambo ozovuleka uzosetshenziswa isikhathi esingakanani. Induku yemitha emithathu, eyenziwe ngefibre engilazi kahle, ekugcineni iyoba nesisindo esikhulu, ukuze ukusetshenziswa kwayo kube nzima kakhulu. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi izinduku ezinde zifakiwe ekulinganisweni kokubheka "i-jig", njengoba zenziwe ngezinto zokwakha noma i-CFRP.
Amakhoyili ekuhlungeni okunjalo angaba ne-inertial or inertial. Lezi zinsuku ziyi-design elula, ngakho-ke kulula kakhulu ukusebenza. Kuze kube manje, abakhiqizi bahlinzeka ngemikhiqizo enhle kakhulu, kodwa kufanele bakhethwe ngokulandela izici ezilandelayo:
Ukuba khona kwe-spool eyanda;
Ukuba khona kwe-stop reverse stop;
Ukukhiqiza i-roller ne-bobbin kusuka kokuqukethwe kwekhwalithi ephezulu.
Zonke lezi zidingo zivela ngenxa yokuthi ngesikhathi sokubambisana kungaba umthwalo omkhulu, futhi ngenkathi umugqa oboshiwe, ovame ukusetshenziswa ku-jig, unendawo yokuqeda.
Izinsimbi zamanje zokuziphindaphindiwe zanamuhla azikho neze izimo ezibucayi uma ziqhathaniswa nabangewona amandla, njengoba zihluka ngokusheshisa okusheshayo komugqa, futhi ngokuqwashisa okukhulu, uma kungenzeka ukwazi ukwaziswa okuvela emgqeni ngezandla. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ukukala kwe-spinnings kwe-jig kuze kufinyelele ku-50 kuhlanganisa amadivayisi anamakhoyili anjalo. Naphezu kweqiniso lokuthi awukwazi ukuhlangana nabo kaningi, basuke bephansi kakhulu ekusebenzeni.
Okubalulekile nakancane ipharamitha, njengenombolo yezingxenye ku-spinning esetshenzisiwe. Iningi le-spinnings livame ukwenziwa kusuka ezigabeni ezimbili kuphela, lihlangene ngokufaka elinye kwelinye. Kukhona nezinye izinketho eziningi zezintambo telescopic ezinamadolo ayisithupha kuya kwangu-8. Ochwepheshe bathi amakhola we-plug kulokhu abhekene nobuzwe obukhulu namandla, naphezu kokuthi amamodeli ahluke kakhulu futhi ngaso sonke isikhathi adinga ukubheka izici ezifana nezindleko zomkhiqizo, ikhwalithi yezinto ezisetshenzisiwe kanye nokuxhumeka kumamodeli ahlukene.
Okulandelayo sizocabangela ukulinganisa okuncane kwe-jig. Ukubuyekezwa mayelana nabasebenzisi bedivayisi ngamunye bashiya kakhulu okuhle, ngakho ukusetshenziswa kwabo kulungile kokubili abaqalayo nabaqeqeshi:
I-Black Hole Hyper. Ama-spinnings anjalo awenzelwe ngokukhethekile ukudoba ngosizo lwe-jig. Lo mgqa uhlanganisa ubude benduku 2.7-3.2 m, kanti uhlolo luvela ku-4 kuya ku-50 amagremu. Igolide yegolide ekuxhumaneni yi-Black Hole Hyper, ephethe ubude obuyi-270 cm novivinyo oluvela ku-8 kuya kwezingu-28 amagremu, okuphelele kakhulu ekudobeni ngokudoba ngokusebenzisa ikhanda eliphansi noma elincane. Uma ucabangela, ukhetha ukuphenya kwe-jig, ukulinganisa kwabakhiqizi, inkampani ye-Black Hole kuyoba enye yephambili.
St. I-Croix Wild River. Le model imelana ngokugcwele nemisebenzi yayo. Ubude benduku lapha bufinyelela ku-289 cm, kanti uvivinyo lufanelekela uhla kusuka ku-10 kuya ku-35 g.
St. I-Croix Avid. Lokhu kuphahlazeka kubuye kubonakale nokuba khona kwamamodeli amaningana emgqeni, kuyilapho zonke zazo zifanelekile imingcele ehlukahlukene yokudoba ama-jig baits.
Shimano Game AR-C. Umbusi unikeza ithuba lokukhetha kokubili ukukhanyisa okukhanyayo kwe-jig, kanye namamodeli anembile kakhulu. Kubhekwa njengenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuqhuba i-jig eliphezulu. Emgqeni kunamamodeli anezinduku ezivela ku-2.5 kuya ku-4.1 ubude ubude, kanti ukuhlolwa kuqala ngo-6 futhi kufinyelela kumkhawulo wamagremu angu-84. Uma ungasetshenziselwa ukugcina imali ngekhwalithi, ochwepheshe abaningi batusa ukunaka lolu khetho, kodwa ngesikhathi esifanayo izindleko zemikhiqizo ziqala kusuka ku-ruble angu-12 000.
I-Banax Meaga. Ukuphenya ngokuhle kakhulu kwe-jig, enesilinganiso senduku ka-2.74, futhi isuka ku-7 kuya ku-35 amagremu.
Major Craft Restive. Okukhethwa kukho okuhle ngentengo enhle, eyaziwa ngezinga eliphezulu lokuzwela lapho usebenzisa ama- bail abhekene ngezansi. Ubude benduku buyi-257 cm.
Okulandelayo, sizocubungula ukuhlelwa kwesabelomali kwe-jig. Isilinganiso sakhiwe ngokuyinhloko hhayi ngexabiso, kodwa ukuthi inani elingakanani lezinga lempahla emikhiqizweni enjalo liboniswa:
I-Black Hole Hyper. Ngokumangalisa, kodwa idivayisi engenhla iyinketho yebhajethi kakhulu uma kuqhathaniswa nabaningi bayo. Intengo yalokhu kuvuleka kuphela ngama-ruble angu-5500.
Izitolo ze-Bass Pro. Izindleko zezintambo ezijikelezayo zizungeze u-$ 100, yingakho cishe wonke umdobi angakwazi ukuzikhokhela. Yingakho ukusetshenziswa kwabo kuvamile phakathi kwezinye izinhlobonhlobo.
I-Volzhanka. Izinduku ezincane eziphansi, ezihlukaniswa isilinganiso esihle kakhulu samanani nezinga. Akungaphansi kwekhwalithi kumadivayisi angenhla, izindleko zabo ziqala kusuka kuma-ruble angu-3000, okuyinto enhle kakhulu.
I-Daiwa Tornado-Z. Okunye okukhethwa kukho okuhle, lapho ubude benduku buyi-272 cm, futhi ukuhlolwa kungu-15 kuya kwangu-50 amagremu. Naphezu kokuthi iningi lamamodeli avela kule nkampani ayabiza kakhulu kunalabo abalingiswa njengamamodeli asabelomali asengaphambili, bonke bahluke kakhulu ngekhwalithi yokwakha, ebalulekile.
Shimano Catana CX. Enye ye-lightning spinnings ye-jiga, enezindleko zamabhulethi angu-3000.
Kunzima futhi kulula
I-spinnings enamandla ihlinzeka ngokubamba usizo lokususa ama-bait-baits ngokulayisha kuqala. Isivivinyo sokuhlunga okunjalo sifinyelela ku-100 g, kepha ngezinye izikhathi kungase kube ngaphezulu. Zilungele ukudoba ngokujulile okukhulu, futhi zihluke kwezinye izibonelo ngokugcizelela ngokwanele amandla amakhulu okuqukethwe. Ngesikhathi esifanayo, izindleko zabo ziphindwe izikhathi eziningana uma ziqhathaniswa namathanga ajwayelekile .
Kuphi amaphaphu asetshenzisiwe?
Amapulangwe ahloswe ukudoba ezindaweni lapho kukhona khona amanje okwamanje noma ngisho engekho ngokuphelele, futhi ayibalwa ngokukhipha isikhathi eside. Ukuhlolwa kwe-spinnings ekhanyayo kuhluka ebangeni kusuka ku-5 ukuya ku-20 g, okusho ukuthi ukubheja okunesisindo esinjalo kuzohlukaniswa nobuzwe obuhle phakathi kwe-wiring.
Ukuphenya okukhanyayo kwenza kube lula ukuhlinzeka ukuzwela okukhulu kakhulu, futhi uma usebenzisa gearse gearse gear, balahlekelwa ukusebenza kwabo.
Kunoma yikuphi, kufanele uqonde ukuthi i-jig-high-spinning ephakeme kakhulu kufanele ihlukaniswe ngophezulu olubucayi. Ukujijimela kuhilela i-palpation eningiliziwe ye-bait, futhi izinhlobonhlobo ze-bait emhlabathini kufanele zilandelwe ngokugcwele uma zilandelela intonga yenduku.
Ngakho-ke, ukukhetha ukugxilisa kufanele kwenziwe ngaso sonke isikhathi kuye ngezimo eziningi. Okokuqala, kufanele ucabangele amathuba akho ezemali, ukhethe phakathi kwesabelomali namadivaysi athuthukile, kodwa ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu ukucabangela imibandela yokudoba, njengamabhasi amancane akudingekile ukuthi usebenzise noma yikuphi ukuphenya okubizayo okwedlule.